XEERARKA LAGU ILAALINAYO DIGAAGGA - BEERAHA DIGAAGA
Marka xilliga gu'ga yimaado, qorraxdu si tartiib ah ayuu u soo dhaweeyaa wadada, dadka degaanka xagaaga oo sugayay bilowgii xilli-ciyaareedka cusub oo dhan jiilaalka oo tagaan guryahooda si u dhow dabiicada.
Tani waxay tagaysaa dacha waxaa badanaa dib loo dhigaa dhowr toddobaad, mararka qaarkood dhowr bilood, dad badan oo nasiib u leh inay leeyihiin guri sida, bilaab digaag.
Shimbirahaasi ma aha kuwo aad u adag oo xannaaneynaya, uma baahna dhibaatooyin iyo dareen badan.
Doorasho aad u fiican ayaa noqon doona digaag, kaas oo ku siin doona ukun muddo dheer.
Laakiin waxaa jira su'aalo ku saabsan digaagga si ay u iibsadaan iyo sida loo ilaaliyo. Xalka ugu habboon ee dhibaatooyinka oo dhan waxay noqon doonaan waxyaalahan.
Su'aasha ugu horeysa ee aad weydiisan kartid ka hor inta digaaggu aysan ahayn arrin doorasho ah. Taasi waa, kuwaas oo lakabyo waa inay ka mid noqdaan beertaada.
Waxa ugu horreeya ee aad ka fekereyso inaad iibsato digaagga, laakiin waxay u baahan yihiin daryeel, iyo wax badan. Waxaa habboon in la doorto digaagga sida ku jirta marxalad dhexe ee koritaanka.
Wixii loogu yeero taranka xilliga xagaaga, doorashada ugu fiican waxay noqon kartaa shimbiraha da'doodu tahay 5 bilood. Waxaad sidoo kale iibsan kartaa digaag badan oo baaluq ah, maadaama aad si fudud u heli karto digaagga da'da shan bilood ee qoysaska.
In a hen ah madaxa madaxa waa ballaaran ku filan qaab ah, si qoto dheer loo dhigay. Indhaha waa inay noqdaan kuwo buluug ah oo cad, iyo dhabarka waa mid dheer oo ballaaran.
Marka ugu fiican markaad dooranayso lakabka waxay ubaahan tahay inay kormeeraan caloosha. Waa inay noqotaa mid jilicsan, oo u dhexeysa dhinaca dambe ee garka iyo lafaha lafdhabarka ah waa inay ahaadaan masaafada u dhaxeysa 4-5 farood.
Caan waa xaqiiqda ah in digaagga la gooyo. Xaaladdan oo kale, waxaad sidoo kale ka heli kartaa hen. Digaagga geliyay nidaamka molting goor ayaa siin doona ukumo badan, iyo wax ka dheer shimbirkii hore u joojiyay daadinta.
Qulqulayaashu waxay u baahanyihiin xaalado, haddaba, ka hor intaanan iibsan shimbiraha waa inay u diyaariyaan qol.
Aagga Metric waxa loo baahan yahay in la xisaabiyo si ay 4 shimbir u leeyihiin 1 mitir oo labajibbaaran. Lakabka dhadhanka qalalan, hay, ama qalab gaar ah ayaa loo baahan doonaa in lagu shubo dabaqa. Miisaanka lakabka waa inuu noqdaa qiyaastii 5 - 7 cm Marka xigta, waxaad u baahan doontaa inaad mar kale ku shubtid meelaha meelaha khashinka ah.
Sifooyinka ugu muhiimsan ee khudradda digaaga ayaa ah cabitaanka iyo quudinta, dhererka kaas oo ah in uu gaaro heerka gadaasha shimbiraha. Ku rakib dhulka. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad ku rakibo siriyaal ay digaagadu seexdaan habeenkii. Waa in lagu dhejiyo derbiga dhererka ugu yaraan 60 cm dusha sare ee dhulka.
Waa inay jirtaa qulqulo badan si ay shimbiraha oo dhan ugu raaxaystaan ​​inay ku fadhiistaan. Buuryo waa in lagu rakibaa geeska mugdiga ah ee coop. Mid ka mid ah booskaasi wuxuu noqon doonaa 3 ilaa 4 digaag. Baaxadda buulkaba waa inay ahaataa ugu yaraan 30 cm, qoto dheer waa in ay gaaraan 35 cm.
Ka dib markii jirridda cayayaanka la sameeyay, maaddada dharka ayaa u baahan doonta in la dhigo hoosta. Straw waxa badanaaba la isticmaalaa, laakiin maryo caag ah ayaa sidoo kale loo dhigi karaa ukumaha ka ilaaliya dhaawaca farsamada.
Digaagga ayaa saameyn wanaagsan ku yeelan doonta digaagga, taas oo ah, hoyga uurka leh waxaad u baahan doontaa inaad kor u qaaddo nooc ka mid ah meelaha la xiray, halkaasoo shimbiruhu ay "socon karaan" inta lagu jiro maalinta.
Marka lagu daro maadooyinka caadiga ah ee keega digaaga, waxaad kaloo shimbiraha ku ilaalin kartaa baqshiinka. Habkani wuxuu leeyahay faa'iidooyinkeeda - shimbiraha baqshadaha waxay u baahan yihiin cunto yar, laakiin waxay ku deg degaan iyo sidoo kale duurka. Per 1 sq.m. Qalabka daboolan wuxuu ku dabooli karaa wax ka badan 10 shimbir.
Iyada oo qaabkan shimbiraha sii kordhaya unuggu waa inuu ku jiraa qorraxda, iyo kuwa caqliga leh iyo kuwa cabsada, inay shimbiraha cirwareenta ku qarsadaan.
Heerkulku waa mid aad muhiim u ah inuu dhigo digaag, tan iyo heerkulka wax soo saarka ukunta ee digaagga si toos ah waxay ku xiran tahay heerka. Qiyaasta saxda ah waa 12 - 18 C Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad si joogto ah u hesho helitaanka hawo cusub, xitaa jiilaalka.
Shimbirahaasi waxay aad ugu baahan yihiin qadarka iftiinka, sidaas darteed guriga hagaaga ah waxaad u baahan tahay in aad samayso iftiin macmal ah si ay digaagadu u helaan nalka ugu yaraan 17 saacadood maalintii.
Xaaladda quudinta digaagga, waxay dhammaan ku xiran tahay da'da shimbiraha. Haddii ay digaaggu yihiin kuwo da 'yar oo wali ha ku degdegin, markaa waxaad u baahan tahay inaad iyaga ku quudiso sida digaagga yaryar - hadhuudh iyo cagaarka.
Marka digaaggu gaaro da'da 19 usbuuc, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo dadka waaweyn ee quudiya iyo borotiinka. Waa markaa muddada koritaanka firfircoon ee xubnaha taranka (ugxan-yarida iyo qoyaanka) bilaabmaa.
Lakabyada firfircoon ee ugu firfircoon ayaa la qaadi doonaa 28-29 toddobaad. Marka digaaggu yahay sanad, ka dibna quudinta waa in aysan noqon mid nafaqo leh, maadaama ay noqon doonto mid aad u xun in la siiyo ukun.
Halabuurka nuujinta, laga bilaabo hadda, waa in uu isku mid yahay ilaa iyo xilliga aad go'aansatid inaad ku disho shimbirta. Ilaa hadda, waxaa jira noocyo kala duwan oo quudin ah lakabyo, laakiin adiga ayaa ku xiran inaad doorato midkee.
Sababtoo ah joogitaanka cunto ee cagaarka iyo khudradda, ugxanta ukunta waxay helaysaa midabka dhalaalaya.
Cuntooyinka qallalan waxaa laga sameeyaa qamadida, cawska, saliida, saliida, kalsiyum carbonate, cusbada iyo fiitamiinada.
Qaybahan waxaa lagu soo bandhigaa qaabab kala duwan oo ah qaabka cylindrical ama si fudud sida xuddunta. Qaybahan waxay u baahan yihiin maadooyin macdan ah, kuwaas oo gacan ka geysanaya nuugista sii fiican. Cuntooyinkaasi waxay ka kooban yihiin fitamiino iyo macaadin, laakiin samee si ay u quudiyaan sida ku qoran tilmaamaha.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa hilibka doofaarka leh qoyan qoyan si aad naftaada u karin karto. Laakiin xaaladdan, inta jeer ee quudinta waa in ay gaaraan 3 - 4 jeer maalintii.
Cuntada qoyan badanaaba waxaa lagu sameeyaa biyaha, taas oo aad u baahan tahay inaad ku darto hadhuudh, saliid, khudaar la jarjaray, saliid. Marka khudaarta muuqdaan, waa mid la moodo in lagu daro cawska, kaabajka jarjaran, iyo bocorka dhalinyarada ee nuujiyayaasha.
In wax soo saaridda ee quudinta sida aad u muhiim ah in lagu hayo tirada, taas oo ah, 60-70% ee feed ah waa carbohydrates, iyo 30-40% waa borotiin. Dhismaha cuntada qoyan waa inuu noqdaa mid cidhiidhi ah, sidaas darteed shimbirku ma xirto gogosha.
Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in lagu daro abuurka macdanta. Cuntada isku dhafan waxay ka kooban tahay qoyan qoyan iyo qoyan, isku dar ah kaas oo lagu daro hadhuudhka.
Midka labaad qaybta ugu muhiimsan ee cuntada digaaga waa biyo. Inta lagu jiro maalinta shimbirku waa in ay cunaan ilaa 0.5 litir oo biyo ah.
Nadiifinta digaagga digaagu waa inay ahaato mid caadi ah oo si fiican, iyo gaar ahaan xilliga jiilaalka, marka shimbiraha ka baxaan qolkaan. Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u dhaqdo quudinta iyo cabitaanada shimbiraha, iyo sidoo kale in laga saaro caws ka soo dabaqa, taas oo ay ku noolaan karaan dulinyo kala duwan.
Aviaries, halkaas oo digaagga inta badan waqtigooda guga iyo xagaaga, sidoo kale u baahan tahay in la nadiifiyo, oo ah, si loo nadiifiyo qashin. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad kormeerto sariiro ay shimbiraha u seexdaan.
Shimbiraha yaryar waxay leeyihiin xasaasiyad aan fiicnayn, sidaas darteed, waa in ay ka fogaadaan digaagga kale ilaa daqiiqad qaas ah.
Si loo hubiyo in noofanimadu horumarinayso baalasha digaagga yar yar iyo kan qaangaarka ah, Shimbiruhu waxay u baahan yihiin inay bixiyaan ash, kuwaas oo ay ku soo dhici doonaan, iyo, sidaas, nadiifiyaan ay baalashooda.
Qodobka labaad ee ilaalinta muhiimka ah waa hawo-qaadid. Nidaamka hawadu waa inuu si taxadar leh u sameeyaa, gaar ahaan waa inuu si wanaagsan u shaqeeyaa cimilada kulul, maadaama kulaylku uu saameyn xun ku yeesho digaagga. Haddii aad si taxadar leh u ilaaliso xayawaankaaga, ka dibna kama baqi doonaan cudurada.
Haddii aad go'aansato inaad digaaga u dhigto jiilaalka, markaa waxaa jira waxyaabo la xidhiidha nolosha lakabka jiilaalka.
Waxa ugu muhiimsan waa in kuleylka guriga lagu hayo si aan shimbiraha u dhigin. Arrintan awgeed qolku wuxuu u baahan yahay in la diiriyo, xir dhamaan dhamaan ceelasha iyo meelaha dillaacsan ee hawada qabow ku dhex gasho guriga.
Waxaad u baahan tahay inaad ku ridato caws ama dhoobo badan dhulka, taasoo ka dhigaysa dabaqa oo kululeynaya. Markaad nadiifinaysid, waxaad u baahan doontaa inaad nadiifiso alaabta faddaraysan, oo ka sii buuxi mid cusub.
Heerka wax soo saarka ukunta ee digaagga waxay ku xiran tahay dherarka iftiinka qoraxda, iyo xilliga jiilaalka, sida aad ogtahay, qorraxda ma iftiin ilaa inta xagaaga. Sidaa darteed, aroortii iyo fiidkii waxaad u baahan doontaa inaad u jeediso nalalka ku jira coop ilaa 3 saacadood. Markaas baahida loo qabo digaagga aduunka ayaa ku qanacsan.
Marka jiilaalka digaag digaag, waa in hadhuudh intaa dheer lagu daraa quudinta, taas oo ka caawin doonta shimbiraha inay kululaadaan. Ka hor inta digaagga bilaabaan inay hurdaan, waxay u baahan doonaan in ay ku shubaan hadhuudhka ee feeders, kaas oo lagu dhajin doonaa waqti dheer caloosha ee digaagga iyo iyaga ka caawin doona iyaga in aan barafoobin habeenkii.
Xasuuso in inta badan soo saarka ukunta ee xilliga jiilaalka uu dhaco. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa mid macquul ah haddii xilligan qabow xilliga qaboobaha aad ka heleyso ukun yar oo ka yar guga.
Haysashada digaagga beeraha ma aha mid adag sida ay u muuqato in jaleecada hore. Sidaa darteed, haddii aad ku nooshahay guri gaar ah, waxaad si ammaan ah u iibsan kartaa 5 lakab oo ku siin doona adiga iyo qoyskaaga ukunta muddo dheer.